KAN NA MADAALE MADAALA ISAAN MALEE MADAALA OROMOON MITI!-Eng. Girmaa Xurunaa (Abdii) – Beekan Guluma Erena
KAN NA MADAALE MADAALA ISAAN MALEE MADAALA OROMOON MITI!-Eng. Girmaa Xurunaa (Abdii)	Beekan Guluma Erena
Politics Category May 18, 2016May 18, 2016BSAASUMMAAN MAALI?
82SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
KAN NA MADAALE MADAALA ISAAN MALEE MADAALA OROMOON MITI!!!
(Namni si hin beekne si hin madaaliin!)
Eng. Girmaa Xurunaa (Abdii)
Basaastummaan maali? Basaastuu saaxiluu kan danda’u eenyuu? Basaastummaan akkamiin saaxilamaa?
Basaastummaa Biyya Itoophiyaa Uummata qabsoo gaggeessu keessatti basaastummaan hojii olaanaa fi qooda guddaa akka taphatu hunduu waan irratti walii galu natti fakkaata. Qabsoon tikaa fi basaastummaa hin qabne qabsoo diina laamshessu ykn jijjiirama waaraa fiduu hin dandeenyedha yoo jennes dhugaa dha. Egaa, Jaarmayaanis tahe dhaabni bilisummaa uummatichaaf qabsaa’u basaastota qabaachuun isaa dirqii dha. Mootummaan abbaa irree wal harkaa fuudhuudhaan uummata qabeenya isaa saamuuf aggaammates basaastota kumaatamaan lakkaa’aman akka qabu wan nu hin gaafachiisu.
Gara Itoophiyaatti yoommuu deebinu sirni basaasummaa biyya kana keessatti diriire caaseffamni isaa maal akka tahe hubachuun murteessaa dha. Sirni basaastummaa biyya kaa keessatti diriiree jiru.
1. Basaastota qaamaan hordofuudhaan eenyummaa fi hojii namichaa adda baasan (Basaastota qaamaan basaasan)
2. Basaastota teknoolojii fayyadamuudhaan basaasan ( Finfisher ( Finspy ), INSA walii gala
3. Basaastota Jaarmaya ykn dhaaba keessa hulluuqanii (Infiltrate) godhanii seenuudhaan odeeffannoo yeroo fi si’aawaa kennan ( Double agents)
4. Basaastota sabboontota fakkaachuudhaan uummatni gamtaadhaan akka wal qabatee dhaaba tokko ykn Jaarmayaa tokko jalatti hin hiriirre wal shakkisiisuun dhaabaa fi uummata adda bittinsan (Kun addatti bara 2013 keessa biyya Israa’el keessatti namoota 900 leenjifamanii biyya Ethiopia seenaniin adda durummaan hojjetama).Uummatni Oromoo qabsoo gaggeessaa jiru keessatti gahee guddaa jarri kun taphataa turanii fi jiran waan jabeessee hubate natti hin fakkaatu. Bara 1980 keessaa eegalee gorsa biyyoottan dhihaan hojiin diiggaa dhaabaa fi Jaarmayaa Oromoo akkasumas dhihoo OFC keessatti raawwate hojii basaastota kanaati.
Basaastummaan kun kallattii tikaa fi nageenya biyyattii duwwaan kan hiriire osoo hin taane Waajjira Poolisoota naannoolee biyyattii keessaa, Ittisa biyyaa, Federaalaa fi humna addaa/ Eeggataa/ keessatti kan diriire dha.
Sirna caaseffama basaastummaa biyyattii keessaa hanga kana nama bal’ifatee ilaaluu danda’uuf yoon hubachiise Olola dhihoo Duula basaasaa saaxiluu jedhamee deemaa ture irratti waan xiqqoo ibsuun barbaada. Qabxiiwwan asitti kaasu kun basaastummaa hubachiisuu fi namni na madaale nama basaastummaa saaxiluu danda’u akka hin taane uummata Oromoo hubachiisuuf malee ana basaastuu miti ykn basaastuudha jechuu koo akka hin taane kan barruu kana dubbisu hubachuu qaba.
Irra deddeebbiidhaan waanti ka’e tokko maallaqa hedduu qaba, Hanga baasee Artistootaaf kennu illee hin lakkaa’u kan jedhu dha. ‘’ Kun double Agent nama taheef akka hin danda’amne irratti ibsa gabaabaan isiniif kenna. Sirna basaastummaa keessaa kan mootummaa keessa taa’ee dhaaba bilisummaaf qabsaa’uuf hojjetus double agent dha. Kan Dhaaba bilisummaaf qabsaa’u keessa taa’ee mootummaaf hojjetus double Agent dha. Double Agent biyya Itoophiyaa keessaa dinagdee dhaabaa fi Jaarmayaa kamuu mootummaa saniif galchu. Maallaqni fi bu’aan kamuu kan mootummaa biyyattiiti taha. Double Agent kun kan jiraatu maallaqa miindaadhaan qacarama jechuu dha. Sirni kun akkamitti akka hojjetu namuma barereffama Duula basaastummaa eegale Obbo Ashannaafii Addunyaa (Milkii Addunyaa ) yoo dhugaa dubbateef gaafatanii baruun danda’ama. Egaa ani double agent tahee akkamiin maallaqa kana baasuu danda’ee??? Hiibboon kun deebii argachuu qaba. Kanaan ala sirna basaasummaaa double agent biyya kanaa ni faallessa jechuu dha. Ammas kan basaastummaa beekna jedhanii xiinxalan kana irratti ibsa gahaa kennuu qaban jedheen itti amana.
Kana malees double agent kan tahe dhaabaa ykn Jaarmayaa keessaa quunnamtii tolchee gama faallaa taheedhaanis quunnamtii tolfachuun waanuma jiru. Fakkeenya Ashannaafii Addunyaa nama Solomon jedhamu waliin quunnamtii tolfateeti double agent tahee hojjeta. Namni basaastummaa saaxilus kana hundeedhaan beekuu qaba. Kanaan ala basaastummaan saaxilame sun guutuu taha jedhee akka nama tokkootti hin amanu.
Sirna basaastummaa saaxiluu kan danda’u caaseffama sirnichaa nama haalaan beekuu danda’u, QBO keessattis nama qaamaan keessatti qooda fudhate tahuutu irra jiraata jedhee amana. Keessumaa Duula basaastummaa saaxiluu deemame keessatti kanneen Profile kiyya hin beeknetu duula kana gaggeesse. Namni profile namaa hin beekne waan namni tokko hojjetu beeka jedhanii amanuun akka nama tokkootti na rakkisa. FKN: Nageessaa Oddoo Duubee qaamaanis tahe hojiidhaan jireenya keenya guutuu kana keessatti wal hin beeknu. Boruu Barraaqaa, Garasuu Tufaa, Kanneen Miidiyaa duubaan eeyyaman Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee facebookdhaan dhaamsa isaanitti dhufu kan argatan malee kan qabsoo oromoo keessatti qooda waliin hirmaanne tokko illee hin jiru. Kana jechuun namootni kun kan na madaalan dhaamsa namootni dhuunfaas tahe garteedhaan haasa’an irraa madaala mataa isaaniin na madaalan malee madaala Oromoodhaan akka hin taanettan hubadha.
Obbo Jawaar Mohaammed ergan maqaa kaasee waanin osoo hin tuqiin hin dabarren qaba. OMN qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa akka raawwate diinni illee hin haalu. Odeessa waa’ee koo akka nama dhuunfaatti funaanuu kan jalqabe baruma OMN kun dhaabbate kana tahuu haalaanin beeka. Yeroo kanatti OMN qabsoo uummatichaaf dhaabbatee sirbootni OMN irratti darbaa turan sirboota jaalalaa tahuun isaanii akka nama tokkootti gaaffii guddaa natti uumee ture. Yeroo kanatti sirbootni warraaqsaa har’a Hawwisoo Qeerroo Jechuudhaan YOUTUBE gubbaatti argaman hedduun isaanii osoo hojjetamaa jiranii, Artistootnis haamileedhaan hojjechaa jiranii OMN irraa sirbootni qabsoo lagataman. Haa tahu malee sirbootni Warraaqsaa kun itti fufuu keessaa fi Artisootnis sirboottan qabsoo kanatti jabeessuun isaanii OMN akka sirboottan warraaqsaa kana dabarsuuf dirqamsiise. Duraan sirbootni qabsoo keessatti qooda guddaa qaban kan akka Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Musaa, Abdii Qophee, Umar Suleeyman, Ilfinesh Qannoo…fi Sirbootni warraaqsaa hedduun artisoota ol guddataniin osoo hojjetamaa jiruu maaliif darbuu dadhabee?? Kana gaaffii isaa Obbo Jawaarii fi Kanneen yeroos turaniif sababa isaa nan dhiisa. Kunis darbee sirboottan warraaqsaa hojjetaman keessatti yaadaa fi deeggarsaan gareen kun keessaa dhibuudhaan madaala mataa isaaniitiin basaastummaa saaxiluuf miidiyaatti dhimma bahuu isaaniiti.
Miidiyaan OMNs tahe Obbo Jawaar gaheen QBO keessatti qaban hin haalamu. Obbo Jawaar olola kana keessatti kallattiin hirmaachuu baatu illee wiirtuu dugdaa akka tahettan hubadha. Nama hubachuu danda’uu fi Kaleessa caasaa bal’aa Oromiyaa keessaa qabna jedhutu har’a itti gaafatama seenaa jala gale jedheen amana. Ani basaasaa tahuu fi dhabuu kan madaalu hojii qabatamaa ani uummaticha keessaa qabu malee kanneen facebook irraan inbox godhanii maqaa xureessaniin akka hin taane namoota hubachuu qaban irraan dhabe.
Basaastuu wayita saaxilan caasaa isaanii keessatti saaxilu. Basaasaan kun caasaa fi Jaarmayaa biraa keessa yoo jiraate illee caasuma sana eeguudhaan sududaan hubachiisu. Obbo Nageessaa Oddoo Duubee OFC keessatti fincila master pilaaniidhaan eegale nutu harkaa qaba erga jedhee caasaa bal’aa fi hundee qabate akka qabuttan amana. Garuu basaasaa wayita saaxilu caasaa dhabuu irraa facebook fi Miidiyaatti dhimma bahuuf dirqamuun caasaallee akka hin qabnee fi Fincila uummatni Oromoo gaggeessaa ture keessattis qoodni Obbo Nageessaa Oddoo Duubee negligible akka tahe hubachiisa. Namootni isaan akka ragaatti dhiyeeffatan miseensota OFC keessaa miti. Basaasaan garuu qabsicha gagegeffamu miidhuu fi laamshessuuf waan deemuuf Jaarmayaa fi dhaabni inni keessa jiru isa murteessa jechuu hin tahu. Kana jechuun OFC keessaas namoota osoo qabsicha irra jiranii dabarsee diinaaf kennetu jiraachuu qabu ture. Kan qabsicha keessatti qooda qabna, Kan nu hiisise isadhallee jedhan OFC keessaa miti. Obbo Nageessaa Oddoo Duubee qabsoo Oromoo OFC duubaan hojjetamaa turetti hinaafee caasaa dhabuu irraa moo dhuguma basaasaa saaxiluuf?? Kan jedhu gaaffii guddaa dha.
Bal’inaan barreessee SEENAA DHUGAA IRRATTI KAN HUNDAA’E KITAABA HANCUFA BOFAA’’ jedhu hangan isin qaqqabsiisutti na muddeen barreesse. Kitaaba kana yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaattin isiniin gaha. Maqaa namootaa osoo hin taane sirna basaastummaa biyyattii keessatti diriire irratti Sabboontota fakkaachuudhaan kanneen hojjetan basaastota hangafaati. Duulli ammas qaama sana tahuu fi Kanneen na madaalan madaala isaanii malee MADAALA OROMOON MITI!!!! Ani yoon basaasa tahe itti gaafatama jalaa baheera; Yoon tahuu baadhe garuu itti gaafatama jala kan seene warreen dirqama kana fudhatani dha.
Namni si hin beekne si hin madaaliin!!!!
Dhugaan ni injifata!!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa82SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← GARGAARSA DURAA ( FIRST AID) – Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa’tiin
CAAMSAAN 20 (ግንቦት 20) WAYYAANEEF GUYYAA SEENAA, OROMOOF GUYYAA SHEENAATI! (Saphaloo Kadiir irraa) →